Axmed Madoobe: “Waa isku mid dowladda iyo Al-shabaab” – Hornafrik Media Network
Axmed Madoobe: “Waa isku mid dowladda iyo Al-shabaab”
By Liibaan Nuur	 On Mar 7, 2020
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) oo maanta furay kalfadhiga baarlamaanka maamulkiisa ayaa halkaas ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabaneysay oo inteeda badan uu eedeymo ugu jeediyey madaxda dowladda federaalka.
Axmed Madoobe ayaa sheegay in qofkii ka horyimaada aragtida madaxda hatan hoggaamisa dowladda federaalka ay ku shaabadeynayaan in uu yahay qaa’inu wadan, sida uu hadalka u dhigay.
Sidoo kale Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay in dowladda federaalka ay joojisay dagaalkii ka dhan ahaa Al-Shabaab, taas macneheeduna uu yahay “in heshiis kala dhexeeyo” sida uu sheegay.
“Bur-burinta dowladda federaalku ay ka wado Jubbaland,waxaan ka leeyahay shalaay ma horeeyee, waa dambeeyaa, Haramcad iyo Shabeel ayey xoreynayaan?”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Isagoo aad u careysan ayuu hadalkiisa sii raaciyey, “Haramcad, Shabeel iyo Shabaab anaga waa iskula kaana mid, Turkiga waxaan ka codsanayaa in ay joojiyaan tababarrada ciidamada naloo adeegsanayo, Qatar-na hanaga joojiso dhaqaalaha ay ku bixiso Soomaaliya, Itoobiyana hana dhaafto fadlan”.
Madaxweynaha Jubbaland ayaa ka dalbaday Madaxweyne Farmaajo in ay ka wadahadlaan khilaafka ka dhex aloosan Jubbaland iyo dowladda dhexe.
“War Farmaajow kaalay madaxweynaheyga ayaa tahay, aan ka wadahadalno waxa na dhexyaalla, hadii lagaa waayo intaas, cid walba aayeheeda haka tashato” ayuu yiri Axmed Madoobe.
Sidoo kale Madaxweyne Axmed Maxamed Islaam ayaa ciidamada ay dowladdu geysay gobolka Gedo waxa uu ugu baaqay in ay joojiyaan duulaanka sida uu sheegay ay ku hayaan dadka shacabka ah, oo uu sheegay in ay barakiciyeen dadkii rayidka ahaa.
“Dowladda federaalka waxaan si sharuud la’aan ah uga codsaneynaa in ay ciidamada ka saarto gobolka Gedo, wadahadalna aan iskugu imaano”ayuu yiri Axmed Madoobe.
Mar uu soo hadal qaaday maqaamka caasimadda waxa uu yiri, “Tacsibaan u dirayaa maqaamka caasimadda Muqdisho”.
Arrimaha dib u eegista dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka ayuu sidoo kale soo hadal qaaday Axmed Madoobe, isagoo sheegay in wasiirkii hore dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jabriil uu geeriyooday, guddoomiye Jawaarina la eryey, waxuuna su’aal ka keenay halka lagu ogyahay howshii dib u eegista dastuurka dalka.
“Dhameys tirka dastuurka waa muhiim Jubbaland-na qeyb ayey ka tahay, waana muhiim in dastuurka loo helo guddi farsamo” ayuu hadaliisa sii raaciyey.
Axmed Maxamed Islaam ayaa khudbadiisa uga hadlay arinta deyn cafinta dalka, waxuuna sheegay in arintan geedi socodkeeda uu soo bilaabay Madaxweynihii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud, haatana ka Jubbaland ahaan ay si weyn u garab taaganyihiin.
Gaas oo goor dhaw gaaray Garowe kana warbixiyey socdaalkiisa sanad kadib
Turkiga oo muhaajiriinta ka hor istaagaya inay Giriigga ka galaan dhanka badda